Inuu ilmuhu si fiican u qabsado naaska marka uu nuugayo waxay ka hortegeysaa xanuunka, ibta naasaha oo nabaro yeesha iyo ilmaha oo ay caanuhu ku istaagaan. Sidoo kale marka uu ilmuhu si fiican naaska u qabsadayo si wanaagsan ayuu naaska u faaruqinayaa kadibna waxa kordhaya samayska caanaha. Hab falkan la sameeyo ee soo socdaa wuxuu naas-nuujinta ka dhigaysaa mid raaxo iyo waxtarba u leh ilmaha iyo hooyadaba
Qabashada ballaaran ee naaska
Talo iyo tusaaloyin waxtar leh oo ku saabsan naas-nuujinta
Ku dheji ilmaha jirkaaga kadibna adigu dib isu eeg.
U qabo ilmaha si ay ibta naasahaagu ugu aadaan sanka ilmaha. Ilmuhu madaxiisa dib ha u celiyo. Ka fikir waa inuu garkaagu xabadkaa/laabta ku dhejisnaadaa sankuna firaaqo yahay.
Sug ilmaha intuu afka si fiican u kala qaadayo. Markaa ilmaha inkale ayaad ku soo dhoweynaysaa naaska kadib ilmaha ayaa naaska inweyn "qabsanaya", ma aha ibta naaska oo keliya. Haku cadaadin madaxa ilmaha naaska.
Marka ay ibta naasku gaarto xagga ugu dambaysa ee dhanxaragga wuxuu naaska ka ilaalinayaa in aanu jeex-jeexmin, inuu qabto iyo inuu nabaryeeshoba. Ilmaha carrabkiisu wuxuu yaalaa safka hoose ilkaha iyo dibinta hoose. Carrabka ayuu ilmuhu ku cadaadinayaa si ay caanuhu u soo baxaan. Nuugitaanka hore xanuun ayuu qofku dareemayaa laakiin wakhti yar kadib wuu ku siidaynayaa kadibna wuxuu qofku dareemayaa inuu maaraynkaro.